China Elbow အထောက်အပံ့စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ကျိုင်းတုံ
တံတောင်ဆစ်များသည်ကျွမ်းကျင်သောအားကစားပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်တံတောင်ဆစ်အဆစ်များကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည့်အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတံတောင်ဆစ် pads အားကစားသမားများအတွက်လိုအပ်သောအားကစားပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အရွယ်အစား: S, M, L သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ကျား၊ မ - ကျားမ
လျှောက်လွှာ - အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးများ
လိုဂို: အပူလွှဲပြောင်း, pvc lable.etc
OEM / ODM ကိုလက်ခံပါတယ်
ပစ္စည်း: neoprene, နိုင်လွန်
လုပ်ဆောင်ချက် - တံတောင်ဆစ်ကိုကာကွယ်ပါ၊ ကောင်းသောချုံ့သည်
တံတောင်ဆစ်များသည်ကျွမ်းကျင်သောအားကစားပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်တံတောင်ဆစ်အဆစ်များကိုကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည့်အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတံတောင်ဆစ် pads အားကစားသမားများအတွက်လိုအပ်သောအားကစားပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ တံတောင်ဆစ်သည်လူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏အခက်ခဲဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားကစားသမားတစ် ဦး ၏တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ရာရရှိမှုသည်အလွန်နည်းသော်လည်းအားကစားသမားများသည်ကြွက်သားပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်တံတောင်ဆစ် pads များမကြာခဏဝတ်လေ့ရှိသည်။
တံတောင်ဆစ် pad ၏ပထမအခန်းကဏ္ pressure သည်ဖိအားပေးမှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာလှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်ဒဏ်ရာရသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပုံမှန်လက်လည်ပတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မလိုအပ်ပါကတံတောင်ဆစ် pads အများစုသည်တံတောင်ဆစ်ကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ တံတောင်ဆစ်များနှင့်ဒူးခေါင်းများသည်တံတောင်ဆစ်များနှင့်ဒူးများဒဏ်ရာရခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပျော့ပျောင်းသောကူရှင်များသို့မဟုတ်မာကျောသောအခွံများအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်နာများကပေါ့ပါး။ လှပသော၊ အဆင်ပြေ။ လက်တွေ့ကျစေရန်တံတောင်ဆစ်များနှင့်ဒူးခေါင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
ဘောလုံးကစားပြီးနောက်အထူးသဖြင့်လက်ဖြင့်ကစားသောအခါ၊ တံတောင်ဆစ် pads တံဆိပ်ခတ်ထားခြင်းကထိခိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်းတင်းနစ်၊ ကြက်တောင်၊ စားပွဲ၊ တင်းနစ်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူငယ်ချင်းများကဤအားကိုတင်းနစ်တံတောင်ဆစ်ဟုလူသိများသည်။ တံတောင်ဆစ်သည်အဓိကအားဖြင့်ဘောလုံးကိုရိုက်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ကောက်ဝတ်အဆစ်ကိုဘရိတ်မထားနိုင်ခြင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်ကိုသော့ခတ်ထားခြင်းမရှိခြင်းနှင့်လက်ဖျံ၏တိုးချဲ့သောကြွက်သားများအလွန်အကျွံဆန့်ထွက်ခြင်းကြောင့်ပူးတွဲပါအချက်ကိုပျက်စီးစေသည်။ တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အတွက်ဘောလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တင်းနစ်ကစားခြင်းတွင်တံတောင်ဆစ်ဒဏ်ကိုခံစားရလျှင်တံတောင်ဆစ်ပါသည့်လက်ကောက်ဝတ်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တံတောင်ဆစ် pads များကိုရွေးချယ်သောအခါသင်ရွေးရန်လိုသည်။ elasticity မရှိဘဲ အကယ်၍ elasticity သည်အလွန်ကောင်းလျှင်၎င်းသည်သင့်အားအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုအလွန်တင်းကျပ်စွာမဝတ်ပါနှင့်၊ အလွန်အကျွံမပါရှိပါကအလွန်အကျွံသည်သွေးလည်ပတ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
၁ အပူကုသမှု - ပူနွေးပြီးစိုစွတ်သောအပူကုသမှုသည်ဒဏ်ရာရအဆစ်များနှင့်ရွတ်များကိုကုသရန်နည်းပြများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆရာဝန်များ၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုဖြစ်သည်။ အဆိုပါတံတောင်ဆစ် pads ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, ထိခိုက်areaရိယာ၌နာကျင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူအရှိန်မြှင့်ရန်အသုံးပြုမှု site ကိုအနီးကပ်လိုက်နာနိုင်သည့်အဆင့်မြင့် elastic ပိတ်ထည်များ, လုပ်နေကြသည်။
၂ သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ။ တံတောင်ဆစ်ဖြင့်ထိန်းထားသည့်ကုသမှုအပူသည်အသုံးပြုသည့်နေရာရှိကြွက်သားတစ်သျှူးများ၏သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဆစ်နှင့်အဆစ်နာကျင်မှုကုသမှုများအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ထို့အပြင်ကောင်းမွန်သောသွေးလည်ပတ်မှုသည်ကြွက်သားများ၏မော်တာလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးဒဏ်ရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၃ ပံ့ပိုးမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု - တံတောင်ဆစ်များသည်ပြင်ပအင်အား၏သက်ရောက်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်အတွက်အဆစ်များနှင့်အရွတ်များကိုအားဖြည့်ပေးနိုင်သည်။ အဆစ်နှင့်အရွတ်ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးသည်။
၄ ပေါ့ပါးပြီးအသက်ရှူလွယ်သောသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ပစ္စည်း၊ ၀ တ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့နှင့်ကူရှင်သက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ စက်တပ်ဆင်နိုင်သောစက်တပ်ဆင်ခြင်း၊
လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ် NBA တွင်တံတောင်ဆစ် pads များသည်ကြယ်များစွာ၏အကြိုက်ဆုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ယော်ဒန်မြစ်အားဖြင့်တံတောင်ဆစ် pads ဆောင်ခဲ့၏လမ်းကြောင်းသစ်။ တံတောင်ဆစ် pads များသည်ဖိအားသက်ရောက်စေရုံသာမက antiperspirant effect ကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှကျော်ကြားသော swingman, ဥပမာ Penny Hardaway နှင့် Grant Hill တို့ကဲ့သို့တံတောင်ဆစ်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်တံတောင်ဆစ် pads ဤမျှလူကြိုက်များကြသနည်း ယော်ဒန်မြစ်သည်ထိုနှစ်၏နိမ့်ကျခြင်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ၂၁ ရာစုတွင်ဂျော်ဒန်သည်တံတောင်ဆစ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်သူ၏လက်ဝဲဘက်တွင်သာဝတ်ဆင်ထားသည်။ NBA နယ်ပယ်သာမကလူဟောင်း၏ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထိုစဉ်ကတရားရုံးတွင်ပေါ်လာသောအကာအကွယ်အရှိဆုံးကိရိယာဖြစ်သည့်လက်မောင်းတံတောင်ဆစ် pad ပါသော။ ကစားသမားတွေဟာသူတို့ဂျော်ဒန်နောက်ကိုလိုက်သလိုတံတောင်ဆစ် pad တွေ ၀ တ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်။ ဂျော်ဒန်အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ တရားရုံးမှာဘတ်စကတ်ဘောဘုရားကိုငါတို့မတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ ယခုအချိန်တွင်တံတောင်ဆစ် pad များသည်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွင်အငြိမ်းစားယူနေပုံရသော်လည်းလက်မောင်းအင်္ကျီလက်များကိုစတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ Kobe, AI, Pierce, Carter နှင့်အခြားကစားသမားများသည်လည်းလက်များကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ သူတို့ကနောက်တဖန်လိဂ်မှလက်မောင်းအင်္ကျီလက်လှိုင်းဆောင်ခဲ့လေ၏။ လက်မောင်းသည်တံတောင်ဆစ် pad နှင့်ကွဲပြားသော်လည်း၎င်းမှာပုံပန်းသဏ္stillာန်ရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် NBA တရားရုံးများ၌တံတောင်ဆစ် pads များကိုတွေ့ရခဲသည်၊ လက်မောင်းအင်္ကျီလက်များသည်အသုံးအများဆုံးအကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
တကယ်တော့အားကစားမှာလက်မောင်းအင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအသုံးများပါတယ်၊
၁။ လက်မောင်းသည်လက်မောင်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ လက်မောင်း၏လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ အကြမ်းဖက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လက်မောင်းကြွက်သားများကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သည်။
၂။ လက်လက်သည်ကြွက်သားများ၏တင်းကျပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ကိုယ်ရံတော်လက်သည်းကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်လူ၏အရေပြားအပေါ်တွင်ဖိအားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပြီးကြွက်သားတုန်ခါမှုကိုတားဆီးပေးပြီးအရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဤသည်တင်းကျပ်စွာကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုထောကျပံ့နှင့်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မယ်
3. လက်လက်သည်လက်မောင်းအပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လက်မောင်း၏စွမ်းအင်ကိုအလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားစေနိုင်သည်။ ဆောင်းတွင်းထွက်သည့်အခါလက်မောင်းအစောင့်သည်နွေးနိုင်သည်။
4. အရေပြားပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်လက်လက်အင်္ကျီများကို ၀ တ်ဆင်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တံတောင်ဆစ်တွင်ဆန့်ကျင်။ တိုက်မိသောအကာအကွယ်ပါသောအစောင့်လက်ကိုင်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ပြုတ်ကျခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းများကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။
၅။ လက်လက်၌နေရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုစနစ်ပါရှိသည်။ နွေရာသီတွင်ပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်အောက်ရှိအပြင်ပန်းအားကစားများသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ၏အရေပြားပျက်စီးမှုအညွှန်းကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။